Guddoomiyaha maxkamadda sare oo tababar u furay garsoorayaal - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)- Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta magaalada Muqdisho tababar uga furay garsoorayaal ka tirsan maxkamaddaha darajada koowaad iyo labaad, si xirfadooda garsoorenimo kor loogu qaado.
Munaasabadda ayaa waxaa ka goob joog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda.
Tababarkan loo furay garsoorayaasha maxkamaddaha ayaa socon doono muddo labo todobaad, kaasoo lagu baran doono casharo kor loogu qaadayo aqoontooda, si ay u gutan waajibaadka saaran.
“Waxaan tababar 2 todobaad socon doona u furay Garsoorayaasha Maxkamaddaha darajooyinka 1aad & 2aad si xirfadooda garsoorenimo loo xoojiyo” ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dhanka kale shahaadooyin guddoonsiyay dhalinyaro muddo sannad iyo saddex bilood soo qaatay tababar ku saabsan garoosrenimo kuwaasoo ku qaatay maxkamaddaha dalka.
“Waxaan shahaadooyin gudoonsiiyey dhalinyaro dhamaysatay tababaro shaqo oo ay sannad iyo 3 bilood ku qaadanayeen Maxkamaddaha” ayuu intaasi raaciyay guddoomiyaha maxkamadda sare.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda garsoorayaasha ka howlgala maxkamaddaha dalka.
Aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka dhalinyarada ee dib-u-eegista dastuurka oo ka furmay Muqdisho